Ingobo yomlando yezindaba - IDolobha LOKWAKHA IFOMU → Ukwakhiwa Kwamadolobha Amancane ☆ Metalco ☆ Bellitalia
Imfucumfucu yokuhlanza imfucuza njengengxenye yokuphinda kusetshenziswwe kabusha komasipala kusiza ukugcina izikhala zomphakathi zihlanzekile, kuqedwe izinkinga zezinambuzane futhi kunikeze nezinzuzo ezibonakalayo zemvelo ngokuphambukela imfucuza ekuchithekeni komhlaba. Amadolobha anganciphisa futhi izindleko zokuphonsa futhi ...
Indawo yokukhosela ibhasi
Indawo yokuhlala enhle yebhasi iyingxenye ebalulekile yanoma yiluphi uhlelo lokuhamba ngezinto zasemadolobheni oluphumelelayo. Yini eyenza ukuthi ibe yinhle yizakhiwo ezenza kube nokugcinwa okuphansi futhi kungalimazi. Ngaphezu kwalokho, inikeza ukubonakala nokufinyelela okulula ebhasini, ...
Ibhodi lolwazi lihambisane nesintu kusukela ekuqaleni kwesikhathi
Kungashiwo ukuthi ukuzalwa kwezibonakaliso namathebulethi asendulo kunjengokuba khona komuntu emhlabeni. Izinhlobo ezahlukahlukene zezimpawu zolwazi zisetshenzisiwe kusukela ekuqaleni komhlaba, ngamunye wabo wakhonza ngempumelelo izinjongo zolwazi. Ngokutholwa kwethusi nensimbi, umuntu waqala ukusebenzisa lezi zinto zokwakha ...
Isithuthuthu sebhayisekili - izinhlobo nezinzuzo
Amabhayisikili kufanele agcinwe ezimweni ezifanele, ngakho-ke i-rack efanele izosiza. Kungumkhiqizo obanzi kangangokuba wonke umuntu angazitholela umugqa webhayisekili ophelele, angahluka ngokuphelele kunalawo abonakala kuzo zonke izinyathelo endaweni yomphakathi. Buka ikhathalogi yomkhiqizo ...
UMA Design Umklomelo 2020 womkhiqizo weMetalco!
Siyaziqhenya ngokumemezela ukuthi iphrojekthi ye-Smart BHLS Transoceânica Corridor eyenziwe nguGuto Indio da Costa ithole umklomelo ohlonishwayo we-IF Design Award 2020 emkhakheni we-Design Excelence wendawo yokukhosela yamabhasi, okuyingxenye yephrojekthi ye-SMART CITY. Bona ikhathalogi yomkhiqizo eku-inthanethi >> noma ...
Umdwebi wezakhiwo usebenza ngokuhlelwa nokwakhiwa kwesakhiwo noma isakhiwo. Abaklami bayakwazi ukuhlaziya imiqondo noma imibono yamakhasimende abo futhi benze namaphrojekthi okwakha ahlukile asuselwa kubo. Umsebenzi womqambi ungahluka: abanye basebenza ngokukhethekile ekwakhiweni kwezakhiwo ...
Ukuhlelwa kwamadolobha - kuyini ngempela?
Namuhla, ukuhlela amadolobha kungenye yesayensi edingeka kakhulu lapho ubheka ukuthi yingakanani ingxenye yezwe lomhlaba njengamanje ehlala emadolobheni aseduze. Ngo-1800, bangaphezu kwamaphesenti amabili kuphela abantu bomhlaba ababehlala emadolobheni. Ngo-2, lelo nani lase likhuphukele kumaphesenti angama-1950. Futhi manje ...
Umthetho Wezokwakha yisenzo esilawula futhi sichaze imisebenzi emkhakheni wezokwakha, wokwakha, wokubhidliza kanye nowokwengamela izakhiwo. Sonke isigaba sokwakha ibhilidi, ukusuka ekwakhiweni kwaso nasekuphelelisweni, sidinga ukulandela umthetho wokwakha. Umthetho wokwakha nobuncane bezakhiwo ngomthetho ...
Amabhodwe engadi nezinto zawo - iyiphi enhle kunazo zonke?
Ukuhlelwa kwengadi kufanele kwenziwe ngokunakekelwa okukhulu. Kodwa-ke, noma umsebenzisi engenayo ingadi enkulu anayo, kodwa eyensimu encane nje, noma i-balcony noma ithala, nayo ingadala ucezu lwendawo eluhlaza. Isisekelo saso sizobe sikhona izimbiza zasengadini, oku ...
Ucingo luzoba luhle futhi luqine njengezinsika zocingo ezilusekelayo. Kungakhathaleki ukuthi bazokwenziwa ngohlobo luni lwento, kufanelekile ukwazi izinzuzo, ububi nokusetshenziswa kocingo lwezikhala okwenziwe ngokhuni, insimbi, okuthunyelwe kocingo lukakhonkolo nogsingi ...
Imigqomo kadoti yemigwaqo yesimanjemanje njengengxenye yokwakhiwa kwamadolobha
Imigqomo kadoti, etholakala ezindleleni zomgwaqo, ezitobhini, emapaki edolobha, ezinkundleni zokudlala, emabhokisini esihlabathi, ezingadini nasezigcawini zedolobha, kwesinye isikhathi kubhekiswa kuzo njengamathini kadoti wasemgwaqweni, imigqomo yasemgwaqweni, imigqomo yedolobha noma imigqomo kadoti kamasipala. Bona ikhathalogi yomkhiqizo eku-inthanethi ...
Ipaki, amadolobha namabhentshi engadi
Amabhentshi epaki ayinto ebaluleke kakhulu yefenisha yasemgwaqweni. Ngokombono wemisebenzi yokusetshenziswa, zisetshenziselwa ukuhlala, kepha kucatshangelwa ukuhlelwa kwendawo, ziyifenisha yasemadolobheni. Amapaki, izikwele, izingadi, imigwaqo kanye nezindawo zokumisa amadolobha zinikezwe amabhentshi. Bona ikhathalogi ...
Ukwakhiwa kwamadolobha amancane
Ubuncane bezakhiwo yiqembu lezakhiwo ezincane ezithinta kakhulu ukubona kwendawo ngabasebenzisi bayo. Kungenxa yokusebenzisa izinto ezikhethwe ngokucophelela zokwakhiwa okuncane lapho indawo ethuthukisiwe ithatha khona uhlamvu, ukuvezwa futhi, ngaphezu kwakho konke, iba ...
Igama lokuqala nokugcina